musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Philippines Kupwanya Nhau » Mutungamiri wePhilippines anosiya zvematongerwo enyika
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Philippines Kupwanya Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Zvakakosha kuti Duterte ave nemutsivi akavimbika kuti amubvise kubva pachiitiko chepamutemo - kumba kana neInternational Criminal Court - pamusoro pezviuru zvekupondwa kwenyika muhondo yake yekurwisa zvinodhaka kubvira 2016.
Mutungamiri wePhilippine, Rodrigo Duterte azivisa nhasi kuti ave kuenda pamudyandigere.
Vazhinji vatsoropodzi uye nyanzvi dzezvematongerwo enyika muPhilippines nekune dzimwe nyika vanoona chiziviso chaDuterte vasina chokwadi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muPhilippines nekune dzimwe nyika dzinoti danho raDuterte rinogona kujekesa nzira yekuti mwanasikana amhanyire chinzvimbo ichi.
Mukushamisa kwakasimudzira fungidziro yekuti aibvisa nzira yemutungamiri wenyika inotungamirwa nemwanasikana wake, mutungamiri ane nharo muPhilippines, Rodrigo Duterte azivisa nhasi kuti haazokwikwidza musarudzo dza2022, asi achasiya zvematongerwo enyika zvachose.
Sarudzo yaDuterte yekubuda mujaho uyu yaigona kujekesa nzira yekuti mwanasikana wake Sara Duterte-Carpio amhanyire basa repamusoro munyika.
76 ane makore ane makore Duterte, anga ari purezidhendi we Firipaini kubvira 2016, haina kukodzera kutsvaga imwe term muvhoti yemutungamiri wenyika gore rinouya, asi inogona kukwikwidza kukwikwidza mutevedzeri wemutungamiri wenyika musarudzo dzegore rinouya.
Kunyangwe hazvo bato rake riri kutonga PDP-Laban pachinzvimbo chakadoma Duterte chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiriri wenyika, akazivisa neMugovera kuti haasi kuzokwikwidza VP, achiti danho iri rakaitwa mukupindura zvido zveveruzhinji.
"Nhasi, ndazivisa kuenda pamudyandigere kubva mune zvematongerwo enyika," akadaro, achionekwa kuCommission on Elections centre muguta guru reManila pamwe chete naSenator Christopher 'Bong' Go, uyo akanyoreswa semutevedzeri wemutungamiri wenyika wePDP-Laban.
"Anotyisa… mafungiro evaPhilippines ndeokuti ini handina kukodzera uye kunenge kuri kutyora bumbiro kutsausa mutemo, mweya webumbiro" kukwikwidza kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika, akadaro.
DuterteSarudzo yekubuda mujaho iyi yaigona kujekesa nzira yekuti mwanasikana wake Sara Duterte-Carpio amhanye basa repamusoro munyika.
Duterte-Carpio pakutanga akataura kuti aisazotsvaga hutungamiriri wenyika nekuti aive abvumirana nababa vake kuti mumwe chete wavo ndiye achapinda musarudzo dzemunyika muna Chivabvu 9, 2022. mujaho.
Sezvineiwo, ane makore makumi mana nematatu akatsiva baba vake sa meya weDavao City apo Duterte akava mutungamiri wePhilippines makore mashanu apfuura. Akashandawo semusoro weguta pakati pa2010 na2013.